I-TRF iqala izinsiza | I-Foundation Foundation
Ikhaya Inkampani I-TRF Ithuthukisa Izinsiza
I-Reward Foundation ikunikeza ngezinsizakusebenza zakamuva zokukusiza ekuqondiseni ezingozini zokubuka izithombe zocansi ze-intanethi. Kulesi sigaba uzothola izinto eziningi ezithakazelisayo. Siqale ukwenza izinto zethu futhi siyajabula ukukwazi ukunikeza ukubuyekezwa kwezincwadi, amavidiyo mayelana nesayensi yezocansi, ukuqoshwa kokuzindla kwengqondo kanye nocwaningo olusha olusha. Siphinde futhi sinikeze izeluleko zokuthi ungafinyelela kanjani emaphepheni oqobo esayensi.
Ngenkathi abantu beqhutshwa ngokuyinhloko ngomzwelo, ubuchwepheshe abukho. It isekelwe logic ehlanzekile, eyakhiwe nge-algorithms eklanyelwe ukuthatha futhi sigxile ukunakekelwa kwethu. I-intanethi yindlela eqondile yokuthonya futhi inomthelela omkhulu ekubunjweni kwamagugu amasiko kunalokho okomndeni. Ukuqonda imiphumela yalo kubalulekile empilweni yethu, ikakhulukazi ezizukulwaneni zethu ezizayo. Ukuze siphendule lo mbono, silalele lokho abantu abafuna ukwazi ngothando, ubulili, ubudlelwane kanye nezithombe zocansi ze-intanethi. Kusukela phakathi no-2014 umsebenzi wethu nabantu abasha kanye nabachwepheshe emkhakheni wezemfundo wezocansi usithole amazinga aphezulu anganeliseki mayelana nekhwalithi, ukufaneleka kanye nokusebenza kwemithombo yamanje yokufundisa. I-TRF iqala izinsiza zokusiza ukulungisa ukungalingani.
Abamele i-The Reward Foundation manje sebekhulume emicimbini yomphakathi engaphezu kweshumi nambili e-UK. Siphinde sakhuluma nezithameli eziqeqeshiwe e-USA, Germany, Turkey naseCroatia.
Sikhulume nawo wonke amafomu abafana namantombazane esikoleni, kanye nokusebenzisana nabo ngamaqembu amancane kanye nomuntu oyedwa. Lokhu kwasiholela ekusebenziseni inqubo ye-Human Centered Design ukuze kuthuthukiswe izinsizakalo ezingase zibheke ubuthakathaka bezixhobo zamanje.
Ngonyaka ozayo I-Foundation Reward Foundation inethemba lokukhiqiza izinhlelo zokufunda ezikoleni zamabanga aphansi nezikondari.
Nazi ezinye izinsiza zethu zamanje…